स्वास्थ्य – News Dainik
१३ माघ २०७८, बिहीबार १३:०९ स्वास्थ्य
कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन यसअघिका भेरियन्टभन्दा लामो समयसम्म छाला र प्लाष्टिकमा जीवित रहने एउटा अध्ययनले दाबी गरेको छ। जापानका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययनमा अल्फा, बिटा, डेल्टा र गामाजस्ता यसअघिका भेरियन्टभन्दा ओमिक्रोन बढी समय जीवितै रहने दाबी गरिएकाे हाे। जापानस्थित क्वेटो प्रिफेक्चुर युनिभर्सिटी अफ मेडिसिनका अनुसन्धानकर्ताहरुले सार्स–कोभ–२ वुहान भाइरस र सबै भेरियन्ट अफ कन्सर्न (भीओसी) बीच भाइरल पर्यावरणीय स्थिरताको भिन्नताको विश्लेषण गरेका थिए। समीक्षा गर्न बाँकी रहेको सो अध्ययनले ओमिक्रोन छालामा २१ …
९ माघ २०७८, आईतवार ०६:२८ समाचार, स्वास्थ्य
काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारी विरुद्धको नेपाल सरकारको खोप अभियानमा सघाउन चीन सरकारले अनुदान स्वरुप २० लाख सिरिञ्ज उपलब्ध गराएको छ । शनिबार उक्त परिमाणको सिरिञ्ज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको यहाँस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । शनिबार हस्तान्तरित सिरिञ्जले जारी खोप अभियानमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ याञ्छीले नेपाली मित्रहरूलाई सहयोग गर्न चीन सरकार सदैब तत्पर रहेको बताएकी छन् ।
कोरोनाको उपचार गर्ने औषधि पर्याप्त छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
७ माघ २०७८, शुक्रबार ०६:३० स्वास्थ्य
काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सबै औषधि उपकरण पर्याप्त रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले कोरोना भाइरसको विरुद्ध उपचार गर्ने औषधि र उपकरण पर्याप्त रहेको बताए । हाल नेपालमा सिटामोललगायत कुनै पनि औषधिको अभाव नरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखासँग १० लाख र सरकारी फार्मेसीमा एक करोडभन्दा बढी सिटामोल छ । मन्त्रालयले सिटामोललगायत …
कोभिडविरुद्धको बुस्टर डोज लगाउन के-के चाहिन्छ ?
६ माघ २०७८, बिहीबार १०:१० स्वास्थ्य
काठमाडौँ । नेपालमा ‌ओमोक्रन भेरियन्ट फैलिएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणदर दिनहुँ बढ्दो छ । त्यसैले पनि सरकारले संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । अझ माघ ७ गतेदेखि सरकारले सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरिसकेको छ। जसकारण अस्पताल र खोप केन्द्रमा खोप लगाउन पुग्नेहरूको भिड छ । यस्तै, सरकारले संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै ‘बुस्टर डोज’ पनि दिन सुरु गरिसकेको छ । सरकारले …
४ माघ २०७८, मंगलवार ११:३४ स्वास्थ्य
काठमाडाैँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च ज्वरो, लगातार खोकी र गन्ध तथा स्वाद थाहा नपाउनेजस्ता लक्षणलाई कोभिडका मुख्य लक्षणको रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ । तर, तेस्रो लहर भित्र्याएको ओमिक्रोनको लक्षण डेल्टाको भन्दा फरक रहेको पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । अधिकांश संक्रमितमा घाँटी दुख्ने र टाउको दुख्नेजस्ता सामान्य लक्षण मात्रै देखिएका छन् । स्वाद वा गन्ध हराउने, ज्वरो आउनेजस्ता समस्या ५० प्रतिशतमा देखिएको बेलायतका वैज्ञानिकहरूको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । ढाड दुख्ने, थकित महसुस …
३ माघ २०७८, सोमबार ११:४५ विदेश, स्वास्थ्य
एजेन्सी । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर शुरु भएको छ । हरेक दिन कोरोनाको सङ्क्रमण फेरी बढेपछि तेस्रो लहर शुरु भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ५८ हजार ८९ जनामा ​​कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने ३८५ जनाको मृत्यु भएको छ । आज सङ्क्रमितको सङ्ख्या आइतबारको तुलनामा १३ हजार कम देखिएको छ । भारतमा दैनिक सङ्क्रमित दर परीक्षण गरिएको …
जाडो मौसममा पनि सागपातको सेवन किन गर्ने ?
३ माघ २०७८, सोमबार ०९:११ स्वास्थ्य
काठमाडौँ । जाडो मौसमलाई खानाको हिसाबले राजा मानिन्छ । तर के तपाईलाई थाहा छ चिसो मौसममा तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने सागसब्जी एकदमै फरक प्रकारमा पाइन्छ । चिसो मौसममा सागलाई विभिन्न प्रकारले सेवन गर्न सकिन्छ र स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुवै वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ । अनुहारलाई चम्किलो बनाउँछ सागपातमा भिटामिन ए र सी पाइन्छ जसले छालालाई सफा बनाउन र छालालाई चम्किलो बनाउन मद्दत गर्छ । साथै, यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट गुणले पिम्पल र …
२ माघ २०७८, आईतवार ११:५३ स्वास्थ्य
काठमाडौँ । दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । महाबौद्धस्थित वीर अस्पतालमा गत २४ घण्टामा ३२ जना सङ्क्रमित भर्ना भएका छन् । अघिल्लो दिनसम्म वीर अस्पतालको कोभिड वार्डमा ४० जना सङ्क्रमित भर्ना भएकोमा शनिबार बिहानसम्म त्यो संख्या बढेर ६५ पुगिसकेको छ । युनिफाइड कोभिड अस्पताल (वीर अस्पताल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा. भूूपेन्द्र बस्तेतले वीर अस्पतालमा भर्ना हुने कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको बताए …
२ माघ २०७८, आईतवार ११:१६ विदेश, स्वास्थ्य
एजेन्सी । भारतमा एक महिनामा कोभिड संक्रमण तीस गुणाले बढेको छ । तर, सामाजिक दूरी, यात्रा प्रतिबन्धजस्ता संक्रमणबाट बच्ने उपाय अवलम्बन न्यून देखिएको छ । कोभिड बढिरहेका बेला लाखौँ हिन्दु भक्तजनहरूले गंगा नदीमा सामूहिक स्नान गरेका छन् । मकर संक्रान्तिको अवसरमा लाखौँले सामूहिक स्नान गरेका हुन् । हिन्दु धर्मअनुसार संक्रान्तिमा पवित्र गंगामा स्नान गर्नाले सम्पूर्ण पाप नष्ट हुनुका साथै मृत्युपछि पुण्य प्राप्त हुन्छ । शनिबार पश्चिम बंगालस्थित गंगामा भक्तजनको भीड …
आजदेखि बुस्टर डोज, क-कसले पाउँछन् ? (पत्रसहित)
२ माघ २०७८, आईतवार ०६:४८ समाचार, स्वास्थ्य
काठमाडाैँ । सरकारले आजदेखि कोभिड-१९ विरुद्ध बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ । अग्रपंत्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई बुस्टर डोज खोप दिइने भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई पत्र लेखेर आजदेखि अग्रपंत्तिमा खटिनेहरुलाई बुस्टर डोज दिन भनेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई माघ १४ गतेदेखि बुस्टर डोज दिइनेछ । पहिलो र दोस्रो मात्रा जुन खोप लगाएको हो, बुस्टर डोजमा …
61 पृष्ठ मध्येकॊ पृष्ठ नं 112345 » 102030...अन्तिम »